Kuthetha ukuthini ukuphupha izinyo elaphukileyo? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
1 Ukuphupha izinyo elaphukileyo
2 Ukuphupha izinyo elaphukileyo ngokubanzi
3 Ukuphulukana nezinyo elithambileyo
4 Ngezinyo elaphukileyo emlonyeni wakho
5 Amazinyo aliqela aphukileyo
6 Ukuvumba kakubi izinyo elaphukileyo
7 Ngamazinyo aphukileyo okanye igazi elininzi eliphuma
8 Ukuphupha umntu ephule izinyo lakho
9 Ukophula izinyo ngelixa uluma into ethile
10 Ngezinyo elinye elaphula elinye izinyo
11 Ukuphupha ukophula onke amazinyo akho
12 Ukuphupha iqhekeza lezinyo elaphukileyo
13 Ngezinyo elaphukileyo eliwela emhlabeni
14 Amazinyo aphethwe gadalala
15 Ukuphupha amazinyo alungiswe kakuhle
Ukuphupha izinyo elaphukileyo
Ukuphupha izinyo elaphukileyo kunokubonisa ukuba abantu abakwisangqa sakho sobudlelwane banokufuna ingqalelo. Kungalixesha lokuba usondele kubo kwaye ubaxhase kubunzima babo. Olu hlobo lwamaphupha lunokumela ixesha elitsha eliza kufikelela kubomi babo bakufutshane kuwe.
Xa umntu ephupha izinyo elaphukileyo, kuqhelekile ukoyika kwaye ucinge ukuba kukho into embi eza kwenzeka. Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka uzame ukutolika ukuba kuthetha ntoni kwaye uqonde ukuba akukho nto inokukhathazeka ngayo. Njalo ukhumbula ukuba ukutolikwa kwephupha kuyahluka kwaye akusoloko kuthetha into enye.
Ukuphupha izinyo elaphukileyo ngokubanzi
Eli phupha linentsingiselo ekhethekileyo kwaye linokubonisa ukuba kufuneka uzinikezele ngakumbi kubantu abasondeleyo kuwe. Kodwa kukwathetha ukhathalelo lwempilo olungakumbi okanye impumelelo kwinkqubela phambili yomsebenzi.
Ukuphulukana nezinyo elithambileyo
Ukuphupha izinyo elaphukileyo lisiwa okanye lithambe kungathetha ukuba umntu osondele kakhulu kuwe uyakudinga. Olu hlobo lwamaphupha lukwabonisa ukuqikelela okungalunganga kwento oyithethileyo kumntu osondeleyo kuwe. Kuyacetyiswa ukuba nothando ngakumbi, ingqalelo kwaye uhlala uzama ukuba kufutshane naba bantu.
Ngezinyo elaphukileyo emlonyeni wakho
Naliphi na izinyo elaphukileyo ngaphakathi emlonyeni linokutolikwa ngokungathi ukuzalwa kwakhona kuyenzeka. Umgaqo ofanayo unokusetyenziswa njengaxa kukho utshintsho kutshintshiselwano lwezinyo lomntwana ngokusisigxina. Amava amatsha aya kuza ebomini bakho kwaye kuya kufuneka uzilungiselele, kuba ayinakuhlala ingcono.
Amazinyo aliqela aphukileyo
Ukuba uphuphe amazinyo aliqela aqhekekileyo kubalulekile ukuzama ukukhumbula ukuba uziva kakubi. Olu hlobo lwephupha lunokuthetha ukuba abanye abantu abasondeleyo kuwe basebenzisa kakubi ukuthanda kwakho okuhle. Kuyafana nokujolisa iingcinga zakho kuwe kwaye ulibale abanye okwangoku.
Ukuvumba kakubi izinyo elaphukileyo
Ukuphupha izinyo elaphukileyo elaphukileyo kunokuba ngumqondiso wokuba ulixhoba lokungcatshwa. Inokuba kakhulu malunga nobuhlobo, usapho kunye nobudlelwane, kodwa ayichazeki. Kubalulekile ukuthathela ingqalelo abo basondeleyo kuwe kwaye uzame ukubona ukuba ingavela phi le nto.
Ngamazinyo aphukileyo okanye igazi elininzi eliphuma
Ukuba ephupheni izinyo laphuka lopha, lilizwi elibi kwaye isalamane sinokulimala. Ayinamsebenzi nokuba yimpazamo yakho okanye yeyomnye umntu, ingahlalutywa nguwe kuphela. Kubalulekile ukuzama ukusondela kwaye uqonde ukuba ngaba nasiphi na isihlobo sitshintshile nawe, zama ukudibana kwakhona.
Ukuphupha umntu ephule izinyo lakho
Ukuphupha umntu ephule izinyo lakho kuthetha ukuba unokulindela ingozi eyakwenzeka. Ayisiyongxaki yomzimba, yezemali, okanye yomsebenzi, kodwa malunga nobudlelwane phakathi kwabantu. Kuyacetyiswa ukuba uzame ukukhumbuza lo mntu uphule izinyo, uhlalutye ukuba konke kulungile phakathi kwakho.
Ukophula izinyo ngelixa uluma into ethile
Olu hlobo lokulala lunokuba yingozi enkulu kwimpilo yakho kwaye ubuthathaka. Lixesha lokuba uhlalutye umzimba wakho, uthathe iimvavanyo kwaye ukuba kunokwenzeka uhlolo oluqhelekileyo. Lonke unonophelo luyimfuneko, kodwa ayisiyonto inkulu kwaye iphupha lisebenza nje njengesilumkiso sento engalunganga.
Ngezinyo elinye elaphula elinye izinyo
Yimpawu embi kwaye umntu owaphuke izinyo uya kukunika amandla. Kubalulekile ukuba uzame ukusondela kuye, kuba ukwimzuzu osengozini kakhulu.
Ukuphupha ukophula onke amazinyo akho
Ukuphupha ukophula onke amazinyo luhlobo lokuziva malunga nemeko yakho yobungcali, oko kukuthi, umsebenzi kunye nemali. Kuyacetyiswa ukuba usebenze nzima kwaye ugxile kwiinjongo zakho, kuba oku kuya kuhlawula ngokukhawuleza.
Ukuphupha iqhekeza lezinyo elaphukileyo
Ukuphupha izinyo elaphukileyo kunokuthetha ukuba ingqalelo iyafuneka ukunqanda enye ilahleko. Zama ukusombulula ezona ngxaki zincinci kwangoko, kuba kwangoko uzisombulula, kuya kuba ngcono kwixesha elizayo.
Ngezinyo elaphukileyo eliwela emhlabeni
Ukuphupha izinyo elaphukileyo liwela emhlabeni kunokubonisa ukuba kuya kubakho umlo kwimeko yosapho. Kubalulekile ukuba uhlale uzolile kwaye uzama ukusombulula lo mba ngokukhawuleza, olu hlobo lwephupha lunokuthetha ukufa ukusuka kumntu osondeleyo kuwe.
Amazinyo aphethwe gadalala
Olu hlobo lwamaphupha lumele ukhathalelo olungakumbi olufunekayo ukuze ufike empilweni yakho. Fumana ugqirha kwaye ufumane iimviwo zesiqhelo, kuba umzimba wakho kunye nomzimba wakho uzifuna zombini.
Ukuphupha amazinyo alungiswe kakuhle
Ukuphupha amazinyo alungiswe kakuhle kubonisa ukuba uya kuba nokuchuma kobungcali kunye nezinto eziphathekayo. Oku kuyakwenzeka ngexesha elifutshane, okt kwiinyanga ezimbalwa.
Ukuphupha izinyo elaphukileyo luphawu oluhle, kuba inokukuxwayisa ukuba kukho into eza kwenzeka. Nokuba kulungile okanye kubi, kuhlala kulungile ukwazi ukuba unexesha elininzi lokucwangcisa.